Vatambi veHTTP Vepamoyo Kuratidzira: 5 Zvimiro zvaunofanira Kuziva | Martech Zone
HLS mutambi iyo inozivikanwa zvakare se HTTP inorarama kutenderera iyo yekutaurirana protocol inova iyo brainchild ye apuro iyo yakatanga kugadzirirwa chete maApple madhizaini asi pakupedzisira yakazopindirana nemamwe madhiraivhu zvakare. Pakati pezvinhu zvakasiyana siyana zvinorumbidzwa, iyo HTTP inorarama yekumhanyisa chikuva inoshandisa iyo adaptive kutenderera tekinoroji inotarisa kune vanobhadharira vanyowani nekuvapa ivo vaviri pane-zvavanoda uye vaponesi masevhisi masevhisi kune ese maApple zvishandiso.
Sei tichifanira kuenda kune yeHLS Player tekinoroji?
Tisati tasvetukira kubandwgon yekushandisa HLS Player ngatitangei tione zvikonzero zvekutanga nei munhu achifanira kuzvishandisa pakutanga.
Kuenderana - HLS mutambi ine hukuru hukuru iyo inotsigira chaiko mabhurawuza ese anosanganisira asi asingagumiri kuKukurumidza, Safari, Google Chrome mabhurawuza, Microsoft Edge, Linux uye Microsoft mapuratifomu izvo zvinoita kuti HLS ive sarudzo yakasarudzika pakati pevanokwikwidza.
Yakatwasuka Nzira - HLS kutenderera inounza odhiyo uye vhidhiyo zvemukati pane internet nenzira isina musono. Mazhinji ekushambadzira vhidhiyo inoridza sevhisi iyo inowanikwa mumusika nhasi inodikanwa kuti iite kuburikidza nhevedzano yekushambadzira kwebasa kubva chaiko kumisikidzwa kwehardware kune software encoding asi kune rumwe rutivi HLS inoyerera inonunurwa pamadhizaini ese neM3U8 mafaera. M3U8 mafaera ane iyo midhiya faira nzvimbo mune yekutamba fomu, uko kwainochengetwa senzira yefaira mune yemuno muchina uye URL yekurarama kutenderera.
Inotsigira Closed Captions - Vatambi veHLS ine-yakavakirwa yakavharwa chinyorwa uye inosanganisirwa muMPEG-2 rwizi rwekutakura.
HLS Player inoshanda sei?
The HLS mutambi inonyanya ine zvikamu zvitatu, chikamu chekutanga ivhavha, chechipiri chikamu chekuparadzira uye chekupedzisira isoftware yemutengi.
HLS Vhidhiyo Player chaizvo inowana kuiswa kweaudio uye vhidhiyo hova dzinozvinyora padhijitari uye dzinovhara mune inoenderana fomati.
Tevere muchikamu chekuparadzira icho chinochengeta akateedzana ekutanga maseva ewebhu, anowana chikumbiro chemutengi uye anotumirwa kumashure kwavari muchimiro chemafaira eindekisi.
Pano mutengi anoverenga index mafaira uye anokumbira kumashure izvo zvinodiwa zvemukati zvinogoverwa muzvikamu. Nerubatsiro rweContent Distribution Network (CDN), zvese izvi zvikumbiro nemhinduro zvinotorwa mune cache. Izvi zvinoderedza mutoro wemaseva ewebhu kusvika padanho rakakura apo vamwe vatengi vanokumbira yakafanana data.
Zvimiro zveHLS Player
HLS player ndiyo yakasarudzika standard kune ese odhiyo uye vhidhiyo kutenderera nekuda kweayo akasiyana maficha ayo anowedzera iyo yekuona chiitiko pasina chero kubhaiza.
Adaptive Bitrate Kutenderera - Kunyangwe iwe uri kushandisa netiweki network kana isina waya iyo adaptive bitrate yekutsikisa tekinoroji inobvumira vashandisi kuchinjika kune akasiyana ekumhanyisa mhando zvine simba uye inovimbisa yakanakisa yekushambadzira mhando pasina chero kukanganiswa. Vatambi veHLS vanoonekwa seimwe yeakanakisa mavhidhiyo ekuparadzira mapuratifomu uko vashandisi vanogona kuwana mufananidzo wakanakisa nerubatsiro rweaya matekinoroji eHLS pazasi mabitrate uye zvakare inogona kuendesa Html5 mhenyu kutenderera zvirimo vhidhiyo nenzira isina musono Nekudaro, HLS tekinoroji inoramba iri seyakaenzana yegoridhe yekushambadzira mhenyu pamwe nemavhidhiyo zvemukati.
Multiple Fomati Player - Munguva yanhasi uye zera, mutambi wevhidhiyo anotenderera anokwanisa kuendesa zvirimo nemhando yepamusoro zvisinei nekuti anokwanisa kutariswa nemidziyo ipi. Iyo HLS inotamba yazvino parizvino kutepfenyura protocol yekushambadzira midhiya iyo inoshandisa tekinoroji yazvino. HLS inoyerera ichienda kune mafoni, mahwendefa, maPC uye chero mamwe majaira mune chero mafomati senge MP4, M3U8 kana MPEG dash kana mune chero imwe fomati zvakare.
HLS & Dash Adaptive - DASH ndiyo inosimudzira yekushambadzira modhi inova mutsivi weiyo HLS nzira yekushambadzira. DASH adaptive inopa iyo yepasi rose standard kutenderera inoenderana neiyo HTTP protocol. Pamwe chete neHLS uye Dash Adaptive yekushambadzira tekinoroji, zvemukati midhiya zvinogona kununurwa kubva kune chero zvakajairika webhu server kune iyo internet.
Multi-bitrate HD Encoding - HLS tekinoroji inonyatsoshandisa iyo yakawanda-bitrate encoding tekinoroji uko vhidhiyo sosi inogadzirirwa uye yakaiswa mukati meakasiyana matrate uye kutepfenyura mune yakasarudzika Yemukati Development Network. Rudzi urwu rwemazhinji-bitrate kana mazhinji hova dzinoita kuti vhidhiyo inoyerera vatambi vataridzike pakati pevakwikwidzi. Izvi zvakare zvinoita kuti vatariri vasarudze rwizi zvinoenderana nemuchadenga wavo nenzira isina musono. Semuenzaniso, kana muoni aine bandwidth yepamusoro, vanogona kusarudza 1080p60 kana yepakati bandwidth vanogona kusarudza 480p kana 360p zvichingodaro.
HLS Encryption Kutenderera - Chaizvoizvo, iyo HLS encryption inoshandisa nzira yeAES encryption uko mafaera evhidhiyo akavharirwa uchishandisa akakosha algorithms HLS kunyorera kutenderera kunoshandisa nzira dzinoverengeka dzinoshanda kuona kuti data rakanyorwa mukati meiyo HTTPS protocol pasina kuburitsa kiyi yakananga kubva kufaira rekuratidzira.
Kurumidza Kutamba - Nguva yekutamba yakakosha kune chero inomhanyisa vhidhiyo inoridza uye HLS tekinoroji inopa nekukurumidza kutamba pamwe nerubatsiro rweamazon web services ine zero yekuzorora.
HLS mutambi anopa end-kumagumo rutsigiro kune vashandisi vane isina hunhu mhando uye yakasimba pakati peimwe yekutandarira fomati fomati. Kupfupisa, iyo HLS yekumhanyisa tekinoroji ine zvakwakanakira zvakati wandei senge adaptive nzira yekushambadzira, inotsigira akasiyana mapuratifomu, ine akawanda-bit chiyero icho chinogona kuendesa pamatafura ematafura uye akasiyana siyana nhare mbozha zvisina musono.
Vplayed ndiye mumwe wevatambi veHLS vakanakisa mumusika nhasi unopa zvinomanikidza zvinhu zvinoenderana nematekinoroji epamusoro-soro ayo anopa vashandisi ruzivo rwakanaka rwekuona. Iine kukurumidza kutamba kumhanya, Vplay inoyerera iwo mavhidhiyo uye odhiyo zvemukati mune yakachengetedzeka gore inomiririra nharaunda.
Tarisa uone Vplayed HLS Player
Tags: 1080pAdaptive Bitrate Kutendereraadaptive kutendereraccCdnmutengi kutambaakavhara zvinyorwazvemukati zvekuparadzira networkdashdash adaptivehls inoenderanahls encryptionhls encryption kutendererahls mutambihttp kurarama kutendereralive streamm3u8anoratidzamidhiya encodingyakawanda-bitrate hd encodingakawanda mutambi fomatiZvikamuvhidhiyo live kutendererakutamba videovplayed